Ahoana no fomba hialako amin'ny tongony marary rehefa mandeha bisikileta? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Narary tongotra aorian'ny bisikileta - ahoana no hamahana
Narary tongotra aorian'ny bisikileta - ahoana no hamahana
Ahoana no fomba hialako amin'ny tongony marary rehefa mandeha bisikileta?
Rehefa avy mitaingina ianao,mahazoamin'ny fahazarana mamelatra eo noho eo, izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fihenjanana sy ny fihenan'nyfanaintainana. Ny quads, hamstrings, glutes ary ny lamosina ambany dia tokonyhofaritra misy fifantohana, toy ireohozatravondrona matetikamahazomihamafy kokoa arakaraka ny faharetanao amin'nybisikileta.22 Aogositra 2018
♪ Bob sy Brad ♪♪ Ireo mpitsabo aretin-tsaina roa malaza ☆ ☆ ☆♪ Amin'ny Internet ♪ - Salama ry olona, ​​izaho Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Miara-dia isika no mpahay fizika fanta-daza indrindra amin'ny Internet - Araka ny hevitray mazava ho azy, Bob .- Natolotro anao i Brad, hitanao io, mialoha azy aho.- Ah, manana ahy izy! 'Sahala amin'ny fanazaran-tena ity --- hiteny aho fa mety manana drafitra tsara.
Eny, misy izany, toy ny mitondra fiara any aorian'ny sambo lakana izy io. (chuckles) - Androany dia miresaka momba ny tsotra izahay ary amin'izay dia azonao atao ny manala ny fanaintainan'ny lohalika, lamosina ary sciatic. - Marina izany, Bob. - Tena zava-dehibe amin'ny toerana marina. - Marina, betsaka ny olona manontany momba ny mitaingina bisikileta misy fanaintainan'ny sciatic ao aoriana ka andao omena ny valiny. - Okay.
Ary raha vaovao amin'ny fantsonao ianao, azafady maka segondra kely hisoratra anarana. Manana lahatsoratra momba ny fomba hijanonana ho salama, ho salama ary tsy hisy fanaintainana, ary mampakatra azy ireo isan'andro. Ianao koa te-handeha amin'ny tranokalanay bobandbrad.com.
Satria manome zavatra foana isika, inona no omentsika izao? Tsy fantatsika izany. Mandehana manamarina azy. Tsara izy ireo, nefa fanomezana mahafinaritra.
Indraindray toy ny kidoro SleepOvation, zavatra toa izany. Na izany na tsy izany, azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'i Bob sy Brad amin'ny Facebook, mipetaka eo an-tampon'ny pejy izy io, afaka mahita kinova fohy kokoa momba anay ao amin'ny Twitter sy Instagram ianao. Bob, okay.
Handeha ve isika? - Ie. - Eny, afaka mijanona tsy mandeha pedal isika mandritra ny fotoana fohy mba hahafahantsika miteny amin'ny mpihaino antsika amin'ny fomba mahomby. Ka ny olana lehibe amin'ny olana any aoriana, ny fanaintainan'ny lohalika mifandraika amin'ny bisikileta dia ny toe-tsaina.
Aiza? Ny fametahana ny seza ambony sy ambany dia tena zava-dehibe, mandroso sy miverina ny manaraka, ary avy eo ny haavon'ny anjavonao dia manakiana mafy ny fanalana ny lamosinao - izay ananantsika eto dia manana ambaratonga roa amin'ny bisikileta eto isika. Manana bisikileta mpampiofana izahay, mandeha tsara izy io, mazàna ireo olona tsy mpitaingina bisikileta matotra, tsy mahatratra kilometatra maro dia hanana mpampiofana. Tsy marina foana izany. - Izaho izany. - Ary bisikileta amin'ny hazakazaka izany.
Ho an'ny olon-drehetra dia sarotra kokoa ny mametraka azy mba hampihenana ny fihenan'ny lamosina ary hiresaka momba izany aho ao anatin'ny fotoana fohy, ho avy izahay, ka raha vantany vao manana bisikileta mivory ho anao ianao dia maniry ny hamory azy tsara raha tsy izany dia hatao hoe olona avy any ivelany. - Tsy mahafatifaty ve izany? Ka amin'izao fotoana izao-- - Ary lazaiko aminao - tsy manam-pahaizana momba an'io mihitsy aho, fa mahita an'izany foana aho ary heveriko fa mahalasa adala ahy izany, indrindra ny seza ambany loatra. - Marina, marina.
Ity seza ambany loatra ity no olana lehibe indrindra. Bob, maninona ianao no tsy mandeha amin'ny bisikiletanao ary hiresaka isika - voalohany indrindra --- tianao ho an'ny bisikiletanao no asehoko hoe ahoana izany rehefa --- eny, zavatra vitsivitsy fotsiny no tadiaviko voalohany. Ento any amin'ny mpanazatra ny bisikiletanao, izany no fomba tsara indrindra.
Oh, aza mandeha lavitra intsony .- Ataovy eo an-tendrombohitra ny kodia eo alohan'izay, ary ny tanjony dia ny hampiakatra ny haavon'ny bisikiletanao mba hizaha ny famaky, ho tonga ara-teknika eto aho izao, fa raha tsy fantatrao, Raha ianao irery manana olona te hanana akanjo ankapobeny, raha tianao amin'ny ankapobeny, okay, manana izany isika eto. Jereo ny seza, raha mijery ny fipetrahan'i Bob ianao dia hitanao fa somary avo kokoa izy io.
Tsy misy ambaratonga izany ary nitaraina i Bob. Hoy izy: eny, tsy mahazo aina izany. Mahatsiaro ho voatosika hiverina foana izy ary tsy mahazo aina amin'izany perineum na prostate izany, ary mety hiteraka olana eo amin'io faritra io ary tsy tianao izany.- Marina mihitsy izany .- Ka mila apetaka io seza io, izay no tsy hanao izany isika izao, fa tanjona izany taty aoriana --- Tiako izany, Brad.
Ankasitrahako fa nanao ny fanitsiana teto ianao, noho izany - Ka amboary ny zava-drehetra, miditra ianao izao, Bob. Izahay izao dia nanangana azy mba hahafahan'i Bob mandeha mandeha an-tongotra. I Bob dia, antsoiko izy ireo hoe “mixeur”, antsoin'ny olona sasany hoe tranom-borona izy ireo rehefa tsy manana clip na pedal tsy misy tsindry ianao, fa izahay kosa aloha mamely ny tranony.
Ary tsy maninona izany raha miresaka. Eny, ry Bob, maninona ianao no tsy mandeha an-tongotra fotsiny fa hipetraka fotsiny. Ka apetraho ao anaty lasely ny fitenenan-tsainao mba hanenony na hahatsapa ho mahazo aina ianao, eo no mahazatra anao matetika? - Marina, marina - Okay.
Amin'ny tontolon'ny bisikileta dia antsoina hoe lasely izy. Rehefa miteny aho hoe mipetraka dia lazain'izy ireo izany hoe sit, tsy izany? - Marina, marina. - Na izany na tsy izany, andao hidina amin'ny toeran'ny 6:00 amin'io pedal io ianao, tadiavinao ity --- Handeha lavitra kokoa aho, sa tsy izany? - Marina. - Andao. - Ny famaky, azonao atsangana ny tongotrao? - Eny.- Ny axis an'ny pedal dia tokony hilahatra miaraka amin'ny valaneo, eo indrindra, ireo lehibe, mandeha amin'ny tongotra aho.- Azo antoka.- Eo amin'ny toerana misy ny rantsan-tongotra no misy anao ireto, ireto dia ny toerana mety ho an'ny tongotra amin'ny pedal. 6:00 toerana, tongotra amin'ny haavon'ny gorodona, ka tsia, afaka mamoritra dorsa ve ianao, bob? Eny, ho ambany loatra izany, ary raha izany, miakara eo na miondrika plantarly, andao ho tsara izany ary avy eo jerentsika ny fihenan'ny lohalika.
Nandeha kilasy nampianarin'ny manam-pahaizana manokana aho izao --- ao aorianao izany, Brad.- Napetrako tao izy io mba tsy hijereko - (nihomehy i Bob) Mpitsabo sy mpitsabo kinesiolojia ary maro izy ireo bisikileta nitaingina, nandinika tsara an'io h, izy ireo no olona matihanina indrindra sy olona manam-pahaizana indrindra teo an-kianja, ary nilaza izy ireo fa eo anelanelan'ny sivy sy 14 degre amin'ny lohalika no avo lenta. Raha mijery an'i Bob isika dia fantatro fa tsy manana goniometra ianao, saingy afaka mandeha ianao raha tsy eo izy, raha refesiko izy izao dia hanana 50 degre amin'ny lohalika - Wow - Mazava ho azy fa ambany loatra ilay seza.
Ity lohalika ity dia mahazo soritr'aretina be loatra rehefa mandeha ny fotoana, koa maninona ianao no tsy mifoha fotsiny Bob, tsara tarehy ity bisikileta ity satria mora ahitsy ny seza, hiakatra iray santimetatra sy sasany eo ho eo aho, mety tsara ho an'ny lahatsoratra iray .Ny mazàna dia tsy maintsy mivoaka wrench ianao ary manao izany. Miverena miverina amin'ny pedal ankehitriny, Bob.
fanamboarana kodiarana tubular
Mahatsiaro fahasamihafana lehibe ve ianao? - Oh yeah. - Ary tsy maintsy mahita anao mety ho avo loatra ianao. - Mety, toa toy ny efa ho tonga amin'ny farany aho - Andao, raha tsapanao izany, maninjitra ny tananao ianao mba hikasika ilay pedal, dia azo antoka fa avo loatra izany.
Maninona raha miverina amin'ny 6:00 maraina eny, efa hitako fa avo loatra ianao.
Tonga ianao ary miverina sy miverina ny raharaha, eny, ary eo ambanin'ny ambaratonga sivy ianao. Aleo avelao fotsiny ianao handao anao kely ary tsy handany fotoana intsony amin'izany aho, fa izany no hevitra. OK.
Noho izany dia nahazo ny seza ianao tamin'izany fomba izany, nahazo ny haavony ianao - - Izao dia tsapa - Toa tena akaiky izahay - Ary tsapa satria ambany dia ambany no naterinao. - Marina.- Ary nahatsikaritra ny tsy fitovizany ianao. - Eny, eny. - Eny, izany.
Manaraka izany dia mandeha amin'ny toerana 3:00 isika, izany hoe, eo amin'ny 12:00, izao dia eo amin'ny telo metatra isika, mila jerena raha mila mandroso na mihemotra ilay seza. Ny tena mety dia ny mampiasa plumb bob mitsangana ianao, ka tena manana boboka aho eto. Hantoninay eo amin'ny lohalika na amin'ny lohalika izy io, azonao atao ve izany, Bob? - Azo antoka. - Mandrosoa, misaotra, tonga lafatra.
Esory amin'ny lalana izany. Ary avelanao hilamina izany, ary rehefa mijery izany izahay, mipetraka eo amin'ilay toerana ahalalanao aina ve ianao? , Matetika aho dia ho toy izany. Mahafinaritra eto. - Okay.
Ka mipetraka eo amin'ny seza izy ary ho hitantsika izany. Ankehitriny ny tendron'ny plumb dia tokony milahatra miaraka amin'ny axis an'ny pedal, izay eo ho eo. Ka ny sezany dia mety tsy maintsy handroso iray santimetatra amin'ny fotoana iainantsika an'ity lahatsoratra ity.
Handeha handroso ny seza aho ary havoakako mba hahafahantsika mahazo tsara an'io toerana io. - Tsara. - Vita ny seza izahay izao.
Vonona handray ny lasabatra ianao. - Gotcha.- Izany no iantsoantsika azy, izany no tiako hiantsoana azy.
Ary ny manaraka dia ny lamosina. Ahoana no tokony hitehirizantsika ny adin-tsaina any ambadika? Ankehitriny, ny masinina elliptika miaraka amin'ity karazana baoritra ity no mety ho scenario tsara indrindra hampihenana ny adin-damosina. Manana fanaintainana miverina na sciatica ianao, izay mitazona anao hitsangana, okay.- Eny, tsy te-ho toy izany ianao.- Marina mihitsy.
Tsara.- Tsy fantatro hoe manao ahoana aho? Ny vatako? - Mahafinaritra ianao ry Bob. - Ny tiako holazaina dia ny fahatsiarovako ny vatako - Oh tsia, tsy te hilaza ny marina aminao aho, fa raha mijery ny vadinao dia fantatrao.
Ka ny haavony dia azo ahitsy eto, azonao atao ny mamaha azy io, ary raha ny marina, raha lasa ambony kokoa izy io, dia tsy dia hihena ny fihenjanana ao an-damosiny, eny, tena hihalehibe araka izay azo atao.- Heveriko fa avo lenta araka ny azony .- Mety ho, tena tsara izany - ary manana mahafinaritra ianao, eny, satria azo apetraka eto ihany koa io, - Oh, izany no-- - Eo amin'ny hatoka-- - Tsy nazava tamiko izany.
Saingy avo araka izay tratranao ihany koa ianao. Mety hiakatra ambony angamba izy io. Raha mpitaingina bisikileta matotra ianao dia mieritreritra ny hafainganana ary tsy mila mijaly miverina ny lamosinao, tsy mety izy ireo.- Marina.- Satria toy ny lay ianao, dia ho tratranao ny rivotra, hampiadana anao izany , fa izany no tsy maintsy sorona ho an'ny lamosinao. - Marina izany, ary ny hany ahiako dia ny mitazona ny fahasalamako any aoriana y.- Izany no toetrako.
Fantatro fa miaraka amin'ny bisikiletako eto ambonin'ny bisikileta mitazona ahy aho, mampahory kokoa ny lamosiko izany. Raha mijery akaiky ianao eto, dia nisy mekaniko nanao fanamarinana fanampiny sy antsasaky ny haavony noho ny mahazatra dia mampiadana ahy, nefa, izany no fomba fiasako miaraka aminy. Ary amin'ny fotoana sasany dia mety ho lasa avo kokoa aho na mahazo milina elliptical, miankina amin'ny fahatsapana ny lamosiko rehefa miditra amin'ny 80s sy 90s aho. (Hehy) Manantena aho izao! - Atta zazalahy, sakaiza! Tiako ity! - Ka hiala, Bob.
Miala, tsara. Ka natsangana ny bisikiletan'i Bob ary avy eo handeha hitady zavatra hafa indray aho momba ny fanaintainan'ny lamosina sy ny fampiononana ankapobeny amin'ny bisikileta. Raha manana bisikileta eny an-dàlana ianao, okay, manana aerobars aho satria manao triathlons ary tiako koa izany.
Rehefa azonao izany dia reraka ny rantsan-tànanao ary eo am-pito na zavatra ao anaty kapaoty ianao, na eto ianao ary matetika ny tanako ankavanana dia manomboka tsy miasa. io nerveuse medial io, ka miditra amin'io toerana io aho ary mitazona azy eo. Somary mafimafy kokoa eo an-damosiko io, fa manaisotra ny hakamoana eny an-tanako.
Matetika mitaingina fisaka toy izao aho, mahatsapa tena tsara kokoa ao an-damosiko. Manemotra ahy amin'ny rivotra aho fa mahatsapa tsara kokoa ny lamosiko ary amin'ity taona ity dia mandeha lavitra aho, hamonjy ny lamosiko sy hampiasako azy eto. Ka ry Bob, tsy misy fanontaniana intsony ve ho anao? - Tsia, fa azoko atao izao ny milaza fa ny toerako dia mila atosika handroso.
Satria mandanjalanja ny lamosiko aho, eo an-tendron'ny rantsan-tànako aho, noho izany --- Eny, marina marina - Izaho dia toy izany ary ianao izao dia izao rehefa nanipika ianao, tena tsy mahazo aina i dasthi! - Ie! Hifarana amin'ny olana prostaty ianao. Raha tsy tianao-- - Ie, hihira soprano eto aho - Ka na izany aza, heveriko fa voasarontsika daholo izany, Bob - Ie, tsara dia tsara. - Tena tsara ny mijery ny zava-drehetra, ka alaharo tsara ny bisikiletanao, aza mandeha tsy mendrika, ary mankafy ny toetrandro. (Ringtone) Oh Bob, ity no --- Faly be aho fa toa izao ianao manamboatra ny bisikiletako, ho tsara toerana aho - Eny, mila veloma isika izao - Eny, Adios! - Amin'izay azonao atao ny miloka.
Mety ve ny mandeha bisikileta amin'ny tongotra maratra?
Ara-dalàna tanteraka izany; ampahany amin'nytsingerin'nynyhozatrafahasimbana syhozatrany fanasitranana izay manampy anao hatanjaka kokoa ary hanatsara ny fahaizanao atletisma. Na izany aza, nomena ny toetoetran'nymitaingina bisikileta, mpitaingina bisikileta no mora voan'nyfanaintainanarehefa manomboka manampy fotoana fanaovana gym amin'ny fanaony izy ireo.9 feb 2018
Maharitra hafiriana vao sitrana ny tongotra aorian'ny bisikileta?
Ity fahatsapana ity dia fantatra amin'ny anarana hoe 'DOMS' na Delaced Onset Muscle Soreness, izay mazàna mahatsapa mafy indrindra 24-48 orarehefafanatanjahan-tena henjana na tsy mahazatra. Izy io dia ny fahasimbana amin'ny hozatry ny hozatrao, izay no antony inoana indrindra, izay mihena matetikarehefa72 ora.
(mozika mangina) - Misy fomba fanao aorian'ny dia-mitaingina maro samihafa. Ary raha ny marina dia ny ahy no tsara indrindra. Hey opie. - Yo, raha ny marina, tsy dia azoko antoka.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao amin'ny fahazarana tonga lafatra aorian'ny fandehanana. (Logo mivoatra) (mozika velona) - Oh ry sakaiza, sarotra ny nandeha. Ary mosarena tanteraka aho, ka afaka manafatra mofo fohy an'arivony tapitrisa ve aho? , silaka karama, iray amin'ireo mofo fohy ary angamba scone? - Tsy mamporisika an'izany mihitsy izahay.
Ny tolo-kevitray, na izany aza, dia ny fanombohana ny fizotranao amin'ny fisotroana zava-mahadomelina ary angamba lovia voankazo sy legioma voakiky ao anatin'ny 20 minitra voalohany aorian'ny fiverenanao avy amin'ny fiaran-dalamby mba hahafahanao mamorona ity dingana ity ary mahazo matanjaka kokoa. (mozika milalao) Tsara daholo fa natory tao izy ary tsara ho an'ny fahasitrananao ny maka hatory kely fa tsy amin'ny fitaovanao bisikileta fa tsy rehefa tsy nisakafo ara-dalàna ianao. Tonga ny fotoana handrandrahako sakafo atoandro ary mandritra ny sakafo antoandro mahandro dia mandeha aho ary mamelatra. (Mikiakiaka) (mozika mangina) Raha natory tsara tao amin'ny cafe i Hank dia nanapa-kevitra ny hody aho ary hanomboka ny fahasitranako miaraka amina boribory boribory kely ary mamelatra, izay tsara indrindra amin'ny fikarakarana ny sasany amin'ireo fahalemena azoko aorian'ny fanazaran-tena amin'ny hozatry ny tongotro androany maraina fa tsara ihany koa amin'ny fanatsarana ny fahalalahako manampy ny toerana misy ahy amin'ny bisikileta, ny fananana antsasak'adiny alohan'ny ilako azy handrahoana sakafo no fotoana mety indrindra amin'izany. (mozika mangina) Oh James, James, James, oviana ianao no hianatra? Tsy misy fomba ahafahanao manomboka sitrana mandra-pahatapitry ny asanao rehetra mandritra ny andro ary fantatro tsara fa maloto toy ny bisikiletiko ny bisikiletanao.
Ka aleo mifoha tsy ho ela ianao dia miala eto ary manosotra azy. Rehefa dinihina tokoa, efa naheno ilay fitenenana ianao fa bisikileta madio dia bisikileta haingana. (mozika mangina) - Noroahin'ny kafe aho, ka heveriko fa tonga ny fotoana hodiako. (mozika mivantana) Marina, nesoriko ny fotoana lava, heveriko fa tokony handro koa aho, whoa, mangetaheta tokoa aho, ary ampy izay - Toa mangalatra ilay labiera ary eny, tsapako ho iray ihany koa izany Tsy izany ilay fomba tsara indrindra hamenoana lasantsy aorian'ny fiofanana mafy; Fa kosa, ny sakafo mahavelona tsara miaraka amin'ny fandanjana proteinina sy gliosida ary legioma mahasalama sasany dia hanampy ny vatanao ho salama tsara kokoa.
Rehefa dinihina tokoa, ianao no mihinana. Androany dia tsapako ny manao zavatra amin'ny atody sy vary. - Ie, tiako holazaina fa mety tsy noho ny tsirony, fa ny fisotroana electrolyte kosa dia hanampy betsaka kokoa anao hanary rano aorian'ny fampiofanana mafy.
Ary avy eo atsangano aloha ny tongotrao, inona izany? - Eny, mipetraha ary miala sasatra. - Niova ianao hatramin'ny andro taloha. Tena matihanina kokoa ianao.
Ary ny zavatra hafa momba ny alikaola dia ny fampiatoana ny fanasitranana anao hatramin'ny 25%. Tsy azoko ambara izany. Zavatra iray izay afaka manampy ny fahasitrananao Heveriko fa mila manandratra ny tongotrao ambonin'ny fonao ianao.
Ary mety ho izany ve? Tsy siansa ao ambadik'izany fa toa mamelombelona ny hozanao amin'ny famelana ny ra hiverina hiverina ao amin'ny vatanao. Makà torimaso kely raha afaka. (mozika mangina) Tsy misy maharesy ny torimaso herinaratra 10 minitra.
Tsara ny famotsorana hormonina hanombohana ny fanarenana anao. Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa mahasoa ny toro-hevitra omenay, omeo thumbs up izahay ary raha mila toro-hevitra bebe kokoa momba ny fanarenana dia ampidiro ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany. Mahantra taloha Hank, milamina ihany izy, sa tsy izany? Raha mila lahatsoratra fiofanana misimisy kokoa dia kitiho eto.
Fa maninona no marary ny feny ao anaty rehefa avy bisikileta?
Zavatra iray isikaafakamifanaraka daholo,diafa izy ireodiafahasosorana aony lalan-drafaritra avymitaingina bisikileta. izy ireodiaateraky ny fomba fahandro ratsy ny hafanana, ny tsindry ary ny fikorontananamitainginanybisikileta. Ny maratra dia miseho manodidinany-tendrony ambony indrindrafeny anaty,ny'Taint', ary io tampon'ny tetezamita iotongotralasa ambany.25 Oktobra 2016
Inona no manampy alahelo amin'ny bisikileta?
Emollient / Chamois crème:
Mametaka cramois cramois mivantana amin'ny pad ao anaty kilaoty fohy sy ny perineum alohan'ny mitaingina ianao ary, na dia mety hahatsapa ho hafahafa kely sy malefaka aza izy eo am-boalohany, ny fahombiazany amin'ny fisorohana ny laselyfanaintainanasaika mahagaga. Mampihena ny disadisa, mandrehitra ny hoditra ary misoroka ny vaky.23 Jan 2014
Ho zatra bisikilety ve ny tongotro?
nyvaliny fohy na tsiabisikiletahandehaataovy ny tongotraogoavana dia - tsia. Mazava ho azy,bisikiletakokoatongotraohozatra, fa amin'ny fampihetseham-batana aerobika dia mandeha izynyfiaretana hozatra fiaretana, mahatonga azy ireo mahatohitra kokoa ny havizanana mandritra ny fiofanana, fa tsy mahatonga azy ireo hihabetsaka.21 Jun 2018
Fa maninona ny tongotro no marary foana rehefa avy miasa?
Rehefa ilaina ny hozatraasamafy noho ny taloha na amin'ny fomba hafa, inoana fa manimba mikraoskaopy amin'ny kofehy hozatra izany, ka miteraka hozatrafanaintainanana henjana. Ny DOMS dia matetika no heverina ho diso fa vokatry ny fananganana asidra laktika, fa ny asidra laktika dia tsy tafiditra amin'izany.
Mamoaka tongotrao ve ny bisikileta?
Afaka bisikiletaVonjeotongotra tongony,fenysy ny fitombenako
Miaraka amin'ny hazakazaka sy lomano,bisikiletadia iray amin'ireo fanazaran-tena aerobika tsara indrindra; izanydiamanatanjaha sy mampivoatra nytongotratonon-taolana sy hozatra aryafakamanampy anao very tavy amin'nyfenyary zanak'omby.11 Aog 2011
Fa maninona ny feny no marary rehefa mandeha bisikileta?
Antony iraisana amin'ny fihaonanafanaintainan'ny tongotra bisikileta nonoho ny fananganana asidra laktika. Mandritra anaodia bisikileta nymampiasa oksizenina ny vatana hanapotehana glucose amin'ny angovo. RAHAnyhamafin'ny fanatanjahan-tenadiabe loatra ianao mety ho lany oksizenina amin'ity fizotrany ity.23 Jul 2018
Ahoana no fomba hampijanonako ny fanaintainan'ny bisikileta?
Manaova pataloha fohy madio foana isaky ny mandeha syAzamipetrapetraka miakanjo fohy maloto sy mando rehefa vita. Raha manao dia mandritra ny andro maromaro ianao, dia alao antoka fa manangona paoty fohy ianao na misasa fitsangatsanganana. Mpitaingina ambony maro no mampiasa savony misy bakteria ao anaty fandroana aorian'ny mitaingina azy hanadiovana tsara nylaselyfaritra ifandraisana.23 Jan 2014
Fa maninona no mijaly ny taolako mipetraka rehefa mandeha bisikileta?
Mety amin'ny tsy metynybisikileta no mety ho antony lehibenytsy mahazo aina eo amin'ny lasely. RAHAnylaselydiaavo loatra, ambany loatra, lavitra loatra, lavitra loatra, tsy avo lenta, na raha ianaodianahatratra lavitra loatra nynykitapom-batsy, mety hiaina ianaofanaintainanavokatr'izany.
Fa maninona ny tongotro no marary rehefa mandeha bisikileta?
Ny mitaingina na mandeha an-tongotra ny fanarenana dia manampy raha mpitaingina za-draharaha ianao. Raha mpitaingina vaovao ianao dia tsara kokoa ny fanarenana ny bisikileta. Kenneth, ity farafaharatsiny manazava ny antony hoe, 'rehefa miverina mivoaka sy mitaingina aho, rehefa nisintona mafy vitsivitsy ny tongotro dia tsy marary intsony ary mahatsiaro ho tsara.'
Fa maninona no ratra ny tongotro ny ampitson'ny fiofanana?
Ny karazana fanaintainan'ny hozatra faharoa, ary ilay karazana izay mety hampahory ny andro amin'ny tongotra, dia ny fanaintainana mihemotra, na ny fahatarana ny hozatry ny hozatra (DOMS) DOMS dia tena mitovy amin'ny feony ary manazava ny antony maharary ny tongotrao. andro manaraka (na roa andro aza) aorian'ny fampihetseham-batana mafy.
Afaka mandreraka ny tongotrao ve ny mitaingina bisikileta lava?
Eny, ny fitsangantsanganana haingana amin'ny bisikileta na ny fitsangatsanganana bisikileta lava - na ny fifangaroana mahery vaika amin'ireo lafin-javatra roa ireo - dia mety hahatonga ny tongotrao hatahotra sy ho reraka. Fa raha hitanao fa reraka be ny tongotrao noho ny taloha dia zavatra hafa no mety hitranga.